Akụkọ - Ihe omuma banyere nyocha akara roba
Ihe omuma nke nyocha akara roba
Ihe Ọmụma nke Rubber Akara Nnyocha
1. Kedu ihe nyocha nke ihe akara roba?
1) Lelee ma ngwaahịa dị ọcha.
2) Lelee ma ngwaahịa nwere vulcanization ntụpọ;
3) Lelee ma ngwaahịa nwere trimming / onu ntụpọ;
4) Lelee ma ngwaahịa nwere ọkọ ntụpọ;
5) Lelee ma ngwaahịa ndị nwere oke ntụpọ;
6) Lelee ma ngwaahịa a oyi, nke rụrụ arụ na ntụpọ ndị ọzọ.
2. Kedu ụdị njirimara nkwarụ nke ngwaahịa akara?
1) adịghị: ndị na-anaghị agwakọta ya na ogige ahụ gosipụtara agba dị iche iche ma ọ bụ ihe ndị mba ọzọ doro anya na ngwaahịa ahụ;
2) Crack: enwere mgbawa doro anya na elu na elu ma ọ bụ ebe ndị ọzọ nke ngwaahịa ahụ;
3) Degumming: a na - ekewapụta ngwongwo ngwaahịa ahụ site na ọkpụkpụ ma enweghị ike ijikọ ọnụ;
4) Enweghị ihe: ngwaahịa enweghị doro anya ngwe ma ọ bụ akụkụ ụfọdụ nwere dịghị mama ogwu ma ọ bụ ezughi oke mama ogwu ma ọ bụ doro anya gluu eruba Chọpụta;
5) Afụ: elu nke ngwaahịa bụ doro anya convex na * Tụkwasị;
6) Akara akara: enwere ahịrị doro anya n'elu ngwaahịa ahụ, ma elu ahụ na-enwu gbaa ma dị n'usoro;
7) Ebu ruru unyi: elu nke ngwaahịa bụ doro anya na ọ bụghị ezigbo onye zuru ezu;
8) akpụzi akara: na usoro nke na-eme ma ọ bụ iji ebu, na concave ịgba ma ọ bụ convex nke kwekọrọ ekwekọ elu nke ngwaahịa a mere site na ukwu na ọkọ nke ebu oghere (ntụpọ nke ngwaahịa na otu ebu oghere bụ otu ihe);
9) Skald: doro scorch n’elu nke ngwaahịa;
10) Mmezi: bọtịnụ ezé na-apụta na akụkụ mmechi, nke ga-emebi colloid nke ngwaahịa ahụ n'onwe ya;
11) Unilateral: akụkụ dị iche iche nwere mmasị, ma ọ bụ karịa ma ọ bụ obere na otu akụkụ, ma ọ bụ na-enweghị ma ọ bụ na-enweghị otu akụkụ. Dịka ọmụmaatụ, obosara nke otu akụkụ buru ibu ma akụkụ nke ọzọ pere mpe, mgbidi mgbidi adịghịkwa edozi;
12) kengbọ ala agbajiri agbaji: enwere akara ngosi doro anya na ebe a na-egbutu ya ma ọ bụ na-egbutu ya bụ nke na-adịghị mma ma na-arụ ọrụ;
13) Na-ejupụta gluu: maka akụkụ nke ngwaahịa ahụ na ọkpụkpụ gosipụtara, akụkụ ahụ ekpughere ga-eji gluu kpuchie ya;
14) Mgbanwe: adịghị ọcha dị iche na agba nke ngwakọta ngwaahịa n'ihi ngwakọta, ebu, wdg;
15) Coil: enwere mgbanaka waya n’elu ngwaahịa a;
16) kefriza ntụpọ: ngwaahịa na-chipped ma ọ bụ gbawara n'ihi kefriza trimming.
3. Kedu ngwaahịa ntụpọ?
1) Ọkpụkpụ ọnwụ (a): enweghị ike iji ngwaahịa ahụ ma kpochapụ ya;
2) Oké ntụpọ (b): a na-ebelata ngwa ahịa ngwa ngwa ngwa ngwa, ngwaahịa ahụ enweghị ike iji ya, ewepụ ngwaahịa ahụ;
3) Ìhè ntụpọ (c): a na-ebelata arụmọrụ nke ngwaahịa a, mana ojiji anaghị emetụta ya, ngwaahịa a nabatara;
4) Micro ntụpọ (d): enweghị mmetụta ọ bụla na arụmọrụ bara uru nke ngwaahịa a. Ọ bụ kpam kpam a ntụpọ mere site ogbenye n'ichepụta na ike ga-eji.
4. Kedu ihe bụ njirisi maka ikpebi nkwarụ?
1) Na ọnọdụ nkịtị, a ga-agbaso ọkọlọtọ nke akara njedebe akara;
2) Ngwaahịa anaghị ekwe ka degumming, cracks na ndị ọzọ na-adịghị ike ntụpọ;
3) adịghị ọcha, gbawara agbawa, scaling, enweghị ihe, egosipụta na rere ure adịghị anabata na-arụ ọrụ ihu, na ọ dịghị ihe karịrị 2 ebu unyi, eruba akara na concave convex ebe erughị 2mm 2 na-abụghị na-arụ ọrụ ihu;
4) Enweghị ntụpọ na ihu arụ ọrụ, egbugbere ọnụ nke ime na mpụta nke akara mmanụ ga-adị nkọ, na enweghị usoro axial na ime na elu elu;
5) akụkụ anọ mgbanaka, ịcha elu kwesịrị ewepụghị, ọ dịghị burr.